Ergaawwan miidhaa qabaatan attamiin gabaasuun danda'ama? - BBC News Afaan Oromoo
Ergaawwan miidhaa qabaatan attamiin gabaasuun danda'ama?
Odeeffannoowwan fayyadamtoonni midiyaalee hawaasaa beekaas ta'e dogoggoraan dabarsan fayyadamtoota biraa irratti dhiibbaa qabaachu danda'a.
Itoophiyaattis ragaaleen karaa feesbuukitiin tamsa'an tokko tokko fayyadamtoota biraa irraatti dhiibaa yoo geessisan hubatamaniiru.
Miidhaa ragaaleen karaa midiyaaleen hawaasaa karaa feesbuukii tamsa'an fayyadamtoota irraan gahan hir'isuuf malli yaadameera. Haaluma kanaanis, maxxansa fayyadamaan feesbuukii irratti (Facebook posts) argu kamiiyyuu, yoo namoota biraa irratti miidhaa ni qaqabsiisa jedhee yaada ta'e, daandii salphaan ittiin dhimmicha feesbuukiif gabaastu jira.
Ofii ergaawwan Feesbuukii namoottarratti miidhaa qabaatan kam fa'ii?
Ergaawwan qabiyyee asii gadii qaban fayyadamtoota irratti dhiibbaa kallattii waan qabaataniifu Feesbuukiin gabaasa naaf taasisaa jedheera. Ergaawwan kunneenis gama barreeffamaa ykn vidiyootiin kan qophaa'an ta'u danda'u.
Haasawwan jibbaa,: Feesbuuk haasaan jibbaa, kan namoota haala saba, bifa, amantaa, saalaa fi sababii miidhama qaamaa namootaatiin adda baasuun ulfina namoomaa isaanii kan gadi buusuu fi kan salphisu jechuun ibseera. Sababiidhuma kanaanis feesbuukiin haasaa jibbaa marsariitii isaa irraa haqa.
Oduuwwan Sobaa: Oduun sobaa jechuun ragaa itti yaadamuun fedhii siyaasaa ykn maallaqaa guttachuuf tamsa'u jechuudha. Baayyeenis kaayyoo dhunfaasaanii fiixaan baafachuuf jecha ragaalee sobaa dhugaa fakkeessuun tamsaasu. Biyya keenyattis ragaaleen sobaa karaa feesbuukiitiin tamsaa'an badiinsa hedduudhaas madda ta'unsaanii ni yaadatama. Feesbukiinis gabaasa fayyadamtoota isaa irraa argatuun erga xiinxaleen booda ragaalee sobaa marsariitii isaarraa haqa.
Tooftaan oduu sobaa ittisuu hojiirra oole
Suraawwanii fi vidiyoowwan garmalee hinto'atamne: Feesbuukiin vidiiyoowwaniifi fakkiiwwan qullaa namaa fi quunnamtii saalaa mul'isan ni dhorka. Kanaafis akka sababaatti dhimmi dhiyaatu, ergaa akkasii ifatti tamsaasuun aadaa fi duudhaa hawaasaa waliin hin adeemu. Kana malees, vidiyoowwaniifi fakkiiwwan kan argaman haala fedhii namoota sanaa irratti hundaa'e ta'usaatiif ragaa argachuun hindanda'amu.
Ergaawwan shororkeessummaa dabarsan: Ergaawwan miidhaa shororkeessummaa ykn kanneen shororkeessummaa faarsan ykn gareewwan miseensa shororkeessitootaaf waamicha taasisu, kanneen sababii shororkeessummaan miidhaan irra qaqabeerratti kan qoosuu yoo ta'e atattamaan akka badu eegama.
Ergaawwan miidhaa humnaan raawwataman mul'isan: Feesbuukiin miidhaawwan humnaan raawwatamanii fi ergaawwan namoota miidhaan irratti raawwatame gadi xiqqeessu ni haqa.
Miidhaawwan saala bu'urreeffachuun raawwataman gonkumaa feesbuukii irratti fudhatam hinqabaatan.
Ergaawwan qabiyyee armaan olitti eeraman qaban attamiin gabaasa taasisuun danda'ama?
Fakkeenyaaf ergaa qabiyyee fakkii kana irratti agartanii kun fayyadamtoota irratti dhiibbaa ni qabaata jennee yaa yaadnu.
Ergaa kana Feesbuukiitti gabaasa taasisuuf fuula ergaa sanaarra gubbaa karaa harka mirgaatiin qabxiilee (...) sadii mul'atu cuqaasaa. Isaan boodas filannoowwan afur nuuf kenna. Achinis filannoo isa dhumaa, jechuunis 'ergaa kanarratti yaada kennaa (Give feedback on this post) kan jedhu sana cuqaasaa.
Filmaata ''Give feedback on this post'' jedhu sana yoo cuqaaftan ammoo filannoo asiin olitti agartan kana isiiniif kenna.
Fakkeenyaaf, maxxansi ykn ergaan feesbuukii irratti agartani sooba yoo ta'e, isa 'False News' jedhu sana cuqaastu. Isaan boodas dhimmicha gabaasa gochuu keessaniif feesbuukii irraa deebii galataa argattu jechuudha.
Sirna Feesbukii kanatti fayyadamuun miidhaa fayyaadamtootarra qaqqabuu danda'u hambisuu dandeenya.